Basic chipanje keke nesinamoni | Kicheni Mapepa
Basic sinamoni keke
Maria vazquez | 08/05/2021 10:00 | Desserts, Keke
Kutsvaga keke yekubheka iyo iri nyore kuyeuka? Iwe unogona kugadzira iri rakakosha sinamoni keke chero kwaunoenda, nekuti iwe unongoda chete mashoma ezvigadzirwa zvekutanga uye girazi remvura sereferenzi yekuverenga huwandu. Chii chimwe, kuyeuka mabikirwo uchava mutambo wemwana kana uchinge wakazviita kakati wandei.
Kunze kwekureruka kwayo, iwe unodawo ese ari maviri saizi yekeke iyi, yakakwana kune iyo nguva apo patinounganidza mhuri kumba, uye kupfava kwayo. Zviri pasina mubvunzo, imwe yemakeke anotapira kwazvo andati ndamboravira Uye inogona kugara yakadaro kusvika mazuva matatu kana yakachengetwa zvine mutsindo.
Haunzwi sekuda kuzviedza? Isa ovhoni kuti ipise uye iwe uchava nekeke iri rakagadzirira mune rinopfuura awa. Shandisa chiumbwa chinosvika makumi maviri nemasere cm dhayamita nemadziro zvishoma zvishoma. Sezvo ini ndanga ndatofungidzira, iri keke rakakura uye rinokwira zvakanyanya muchoto. Ita shuwa kuti pave neinokwana 3cm kubva pamusoro pechingwa kusvika kumucheto weforoma. Uye usarega chero munhu aine ovhoni mumaminetsi makumi mana ekutanga kana zvikazoitika kwauri seni uye chimiro chayo chichava chakashata.
Iyi yakakosha sinamoni keke inoshamisika nekureruka kwayo, hukuru hwayo uye kupfava kwayo. Kwete kutarisira mberi kuzviedza?
Kubika nguva: 55 M
4 mazai L
2 magirazi eshuga
1 girazi yemukaka
1 girazi remafuta ezuva
1 Teaspoon vanilla yakabudiswa
3 magirazi eupfu
1 sachet ye mbiriso
Isu tinopisa huni kusvika ku180ºC.
Mundiro tinorova mazai neshuga kusvikira musanganiswa wabuda.
Zvino, uku uchirova, wedzera zvakasara zvemidziyo yemvura, mumwe nemumwe.
Kana zvabatanidzwa, tinowedzera hupfu, mbiriso nesinamoni zvakasvinwa, zvovhenganiswa nekufamba kwekufukidza, kusvikira mawana hupfu hwakafanana.
Pashure tinozora chakuvhuvhu kana isu tinoriisa nepepa rekubheka uye tinodurura mukanyiwa mukati maro.
Isu tinobheka pa180ºC kusvikira keke raibva, maminetsi makumi mashanu nemashanu. .
Kana tangoita, tinobvisa keke kubva muchoto uye rega riite hasha kwemaminitsi gumi kusvika isina kumisikidzwa padanda rewaya uye rega itonhore zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Desserts » Basic sinamoni keke
Mbatatisi saladhi nesalmoni, apuro uye kurohwa chizi